Imisebenzi yezandla ngezinto ezinokuphinda zisetyenziswe: iingcebiso nemibono | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Zininzi iindlela zokusebenzisa izixhobo esingazukuphinda sizisebenzise. Enye yazo kukwenza yezandla ngezinto ezenziwe ngokutsha. Umsebenzi wobugcisa kulula kukuba bayakuvumela ukuba ugcine kula maxesha anzima kakhulu kwezoqoqosho. Ukongeza, sinokwenza ubugcisa ngezixhobo ezirisayikilishwe ekhaya ngaphandle kokuthenga nantoni na ngoncedo losapho kunye nabahlobo.
Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba zeziphi ezona zinto zingcono ezenziwe ngobuchwephesha kunye nezinto ekufuneka uzenzile.
1 Yezandla ngezinto ezenziwe ngokutsha
2 Yezandla ngezinto ezenziwe ngokutsha ukuhombisa indlu
2.1 Izibane ezineebhotile zeplastiki
2.2 Iishelufu, iipuzzle, iileyili kunye nezibane
3 Imisebenzi yobugcisa eyenziwe yavuselelwa: sebenzisa ithuba lezinto ezindala
Ukuba ufuna ukugcina imali kakuhle ekhaya, kungcono ukwenza ubugcisa ngezinto ezihlaziyiweyo. Yindlela engabizi mali ininzi yokwenza izinto zasekhaya ezenziwe sithi. Ukongeza, le ndlela isinceda ukuba siyilungelelanise nezinto esizithandayo. Sinokwenza izinto ezintle ezisebenzisekayo neziluncedo ekhaya. Ukuba songeza kuyo yonke le nto siyenza ngobugcisa ngezixhobo ezirisayikilishekileyo, siyakonga imali kwaye sinciphise ifuthe kwindalo esingqongileyo esiyivelisayo.
Ngokuqinisekileyo uya kuba neebhotile zeglasi, amaphephandaba amadala, njl. Asenzi nto ngaphandle kokuziphosa kwisitya. Enkosi ngezimvo esiza kukunika zona, ungazinika ezi zinto ubomi bobabini.
Yezandla ngezinto ezenziwe ngokutsha ukuhombisa indlu
Makhe sibone ukuba zeziphi izinto eziphambili ezenziwe ngobuchule ezinokuphinda zenziwe ukuhombisa ikhaya lethu. Le yobugcisa Zilula, kulula emehlweni, kwaye zibiza kakhulu. Ngapha koko, unokutshintsha ukubonakala kwendlu yakho amatyeli aliqela ngaphandle kokuchitha imali eninzi. Makhe sibone ukuba zeziphi ezi zinto zobugcisa.
Izibane ezineebhotile zeplastiki
Yenye yezona zinto zilula, ezona zisebenza kakuhle ezihlanganisa ubuchule bomntu ngamnye kwisitayile esiza kwenziwa. Ukongeza, kuyanceda ukunxiba zonke iikona zendlu yakho ngesitayile esaneleyo ngaphandle kokuchitha imali. Asigcini nje ukugcina imali kodwa sikwanceda nokusingqongileyo ngokunika ibhotile yeplastiki ubomi besibini.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukupeyinta ibhotile ngombala owufunayo kwaye ukongeza isikrini kumdlalo. Kwaye ayisiyiyo kuphela into enokuthi yenziwe ngayo izibane. Ingenziwa kwakhona ngeembiza zetoti, ibhiya okanye iinkonkxa zesiselo. Ukwenza ezi zibane, kufuneka ungabinanto, i-drill yokwenza imingxunya, ipeyinti eyimfuneko kunye nezibane eziza ngetyathanga. Ezi zibane ziyafana nezo zisetyenziselwa imithi yeKrisimesi.
Iishelufu, iipuzzle, iileyili kunye nezibane
Amavili asebenza ngokutsha ayenye yeyona nkunkuma ininzi kwiindawo ezisezidolophini. Mhlawumbi unamavili amadala kwaye unokwenza ishelufu entle yoqobo kunye nawo. Le shelufu ikulungele ukubeka kwigaraji okanye kwigumbi lomntwana. Ngetayara nje, ezinye iibhodi zomthi kunye nobuchule obuthile be-DIY unokuba neshelufu yakho yeencwadi. Ungawushiya umbala wendalo okanye uwapeyinte ngemibala eyahlukeneyo.
Ngokuqinisekileyo ulahlekelwe yiphazili kwiidraki ezineziqwenga ezingekhoyo okanye sele uyenzile amatyeli amaninzi. Ingasetyenziselwa ukufumana uyilo olunomtsalane kakhulu. Ezi zoyilo zinobuninzi bezicelo. Umzekelo, unokwenza amanani anje ngesithsaba esifanelekileyo somthi weKrisimesi.
Sinokuphinda sisebenzise kwakhona iipropu zomsonto esele zisetyenzisiwe iminyaka emininzi ngexesha lokuthunga. Ngomsonto unokwenza ubugcisa obuninzi njengemifanekiso yokuhombisa ekhaya.
Iidreyini zekhitshini kunye negrater zinokusetyenziselwa ukwenza ubugcisa ngezinto ezinokuphinda zisetyenziswe. Ezi zixhobo zinokusetyenziswa okumbalwa ngaphandle kogalelwe itshizi kunye neminye imifuno. Banokugqibelela ekwenzeni izibane kwaye bajongeka benomtsalane. Unokwenza okufanayo ngedreyini yekhitshi kunye nezinye izixhobo. Kufuneka ubeke izitya eluphahleni kunye nebhalbhu yokukhanyisa ngaphakathi. Iya kuba nefuthe elimangalisayo.
Imisebenzi yobugcisa eyenziwe yavuselelwa: sebenzisa ithuba lezinto ezindala
Imiphanda yeentyatyambo yinto eshiyekileyo kuyo nayiphi na indlu enezityalo okanye izitiya zangaphakathi. Ayiloxesha lokuqala ukuba uye kubona ibhalbhu yokukhanya efakwe kwimbiza yeentyatyambo. Ukwenza oku, siza kusebenzisa ii-bulbs esele zigugile ezindala kwezo zinemisonto. Ezi bulbs ziphelelwe lixesha kodwa zinokunikwa ubomi besibini. Izinto esifuna ukuzenza ngembiza ezineebhalbhu zezibane zezi zilandelayo: ibhalbhu yokukhanyisa, iipleyiti kunye nesilicone eshushu. Le nto yokugqibela inokuzikhethela.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukususa ikepusi yebhalbhu kwaye koku siza kusebenzisa iipleyisi. Nje ukuba siyivule ibhalbhu, sisusa iqhekeza eliphakathi elinombala omnyama. Ngokwesiqhelo esi siqwenga siphezulu sikwindawo ephezulu yenqaba. Xa siyisusile, siya kuyinika ukusikeka okuninzi ngeepleyita ezifanayo ukuze sikwazi ukwaphula esi siqwenga seglasi. Isiqwenga sesona siphethe ukubamba imicwecwe esiza kuyisebenzisa. Mhlawumbi eli lelona candelo linzima yayizobugcisa kuba kuya kufuneka ubuthathaka kule ndawo. Sisiqwenga esiethe-ethe kwaye ukuba sibethe kakhulu singayiqhekeza yonke ibhalbhu.
Xa siphule iqhekeza leglasi sizama ukuphelisa umjikelezo wonke wesangqa. Le yindlela esinokuthi sisuse ngayo zonke iincopho ezinokubakho ezilungisiweyo emva kwesibetho. Nenxalenye ejikelezwe ngaphakathi, iya kuhlala kunye nemisonto ngaphakathi kwebhalbhu. Ngoku lixesha lokuba ubaphume. Eyona ndlela ibalaseleyo yokubeka ibhalbhu ijonge ezantsi kwaye Thatha i-swab yomqhaphu efakwe etywaleni ukucoca yonke iglasi yebhalbhu, ngaphakathi nangaphandle.
Ukuba sifuna ibhalbhu ime, kufuneka sithathe umpu we-silicone kwaye sibeke iiglobhu ezininzi emazantsi. Sinokuzisebenzisa ezi nyembezi zokuncamathisela ezizenzekelayo. Inyathelo lokugqibela kukubeka iintyatyambo ngaphakathi kwaye ungabeka izityalo zendalo ngamanzi amancinci okanye ilaphu okanye ukulinganisa kwezityalo zeplastiki. Ukuba ufuna ukuyixhoma, sidinga kuphela intambo yomqhaphu ukusongela ikepusi kwaye siyibeke kwikona yegumbi.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nezinye zezona zinto zingcono zokusebenza kunye nezinto ezisetyenzisiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Ikhaya eliGreen » Yezandla ngezinto ezenziwe ngokutsha
Otter P sitsho
NDITHANDA UKUBA UBEKE UKWENZA I-Craft ESISIKELELEYO KUBA NDIYENZE KUDE KULE LWESIHLANU NANJENGOKO ABAYIBEKANGA LE NKQUBO NDENZAYO, NGENXA YEPHULO LAKHO NDIYAFUMANA I-1.0 KWI-TRADE NE-DUVERSE MATERIA, JERK, NDIYA THANDA UKUBA KUYE KWENZEKE NGAMNYE.
Phendula kuOtter P ongaziwa
Umsebenzi weFly kwizinto eziphilayo